Manomboka amin'ny faran'ny faritra mampionona anao ny fiainana. - Neale Donald Walsch - Quotes Pedia
Isika rehetra manana nofy sy tanjona eo amin'ny fiainana. Fa matetika dia voafatin'ny zavatra hitantsika manodidina sy ny ataon'ny hafa manodidina. Fa mila mahatakatra isika fa tsy tokony ho voafetra ihany isika.
Tokony hitady ireo tombontsoa maro samihafa isika ary raha azo atao, andramo ihany koa. Amin'izay dia tsy ho azontsika mihitsy ny safidy isan-karazany misy. Azontsika atao mifanaraka amin'izany ny drafitra.
Fantaro fa mahaliana ihany ny fiainana rehefa manosika ny fetra ianao. Tena mora ny miditra ao anatin'ny faritra fampiononana voafaritra. Tsy mitaky antsika hanosika ny tenantsika hanao zavatra izay tsy mbola nomanin-tsika hatao. Tsy mahatonga antsika hitrandraka ny tenantsika sy tsy ho tratranay.
Rehefa mivoaka avy ao amin'ny faritra mampionona anao ianao ary manandrana zavatra tsy voaforona dia mety hahita fotoana vaovao momba ny tenanao ihany koa ianao. Ireo zavatra ireo dia mahatonga ny fiainana hahaliana kokoa sy manome endrika anao.
Amin'ny faran'ny faritry ny fampiononana voafaranao izay manomboka ny fiainanao. Manokatra ny tenanao amin'ny tsy fantatra ianao izay manova tanteraka ny fiainanao ary miova ny nofinao koa. Mahita olona vaovao misy tantara vaovao ianao ary manana fiantraikany hafa aminao.
Hanana fitaomam-panahy isan-karazany ianao avy eo izay hitarika ho amin'ny hetaheta samy hafa. Mety ho hitanao fa mandeha amin'ny lalan-kafa tsy mitovy hevitra amin'ny fiainana izay tsy noeritreretinao velively ny tenanao raha tsy nandao ny faritra nampionona anao ianao. Misokafa amin'ireto fanovana ireto ary mitondra fiainana mahaliana sy manatanteraka.
Top Quotes momba ny fiainana
Teny momba ny fahendrena amin'ny fiainana